Miparitaka ny bala sy ny basy… : gorobaky ny bala valo ny 4×4 an’ny zandary tany Betroka | NewsMada
Miparitaka ny bala sy ny basy… : gorobaky ny bala valo ny 4×4 an’ny zandary tany Betroka
Manana olana ny zandary amin’ny ady amin’ny dahalo any Betroka. Eo ny fiparitahan’ny bala sy ny basy, manampy trotraka koa ny sakantsankana ataon’ny olom-boatendry sasany. Fiara 4×4 an’ny zandary izao no norarafan’ny dahalo ny tifitra tany an-toerana…
“Nitombo ny tsy fandriampahalemana any Betroka tato ho ato. Miparitaka ny bala sy ny basy any an-toerana, ary ahenoana mipoapoaka toy ireny afomanga ireny isaky ny adiny iray any an-toerana”, hoy ny fanazavan’ny kaomandin’ny vondron-tobim-paritra Anosy, ny kolonely Ranaivoarison Théodile, tamin’ny mpanao gazety. Mafana amin’ny asan-dahalo hatramin’izay iny Betroka iny. Tonga teto Antananarivo ilay fiara 4×4 an’ny zandarimaria norarafan’ny dahalo ny tifitra tany Betroka ny 27 jona lasa teo. Naseho tamin’ny mpanao gazety ilay fiara feno diam-bala. “Saika ratsy ny nanjo ny kapiteny Harena satria amina milimetatra ny tsy nahavoatifitra azy. Voatifitra tamin’io fotoana io koa ilay adzidà sefo iray namoy ny ainy. Anisan’ny mampiseho izao fa manana basy ny dahalo ary manana bala maro ihany koa”, hoy ny fanazavan’ny kolonely Théodile. Nisy ny fampiasana angidimby tamin’ny fanenjehana ireo dahalo fa niala maina. Efa nisy ihany kosa anefa ny voasambotra tamin’ity fanafihana ity, ary efa naiditra am-ponja.
Olana ny olom-boatendry
Araka ny nambaran’ity kolonely ity, anisan’ny olana amin’ny ady amin’ny dahalo any amin’ny faritra iandraiketany ny sakantsakana ataon’ny olom-boatendry. “Tsy misy loatra ny fiaraha-miasa eo amin’ny mpitandro filaminana sy ireo olona ireo. Lasa miparitaka ny hery ka mahazo vahana ny olon-dratsy. Efa misy ny fifampiresahana amin’ny lehiben’ny distrika momba ity olana ity”, hoy ny fanazavana.
Ohatra amin’izany ny fahafantarana ny fisian’ny toerana fandehanan’ny omby halatra any Andriry, izay efa nahitana omby 400 indray maka. Omby 50 hafa niditra tao, saingy tsy afaka niditra tao ny zandary noho ny sakantsakana.
Mitady vahaolana ny zandary amin’izao fotoana izao, ary anisan’izany ny fifampiresahana amin’ny mponina. “Misy amin’izy ireo ihany ny dahalo ary efa fomba any an-toerana izy io, ka mety hiala amin’ny halatra omby rehefa resy lahatra izy ireo”, hoy ny fanamafisana.
Miaiky ny zandary fa sarotra ny ady amin’ny dahalo, raha ny any Betroka manokana. Miparitaka ny bala sy ny basy, manakantsakana ny asa ny olom-botendry. Tsy mahagaga raha manjaka ny asan-dahalo. Tazanim-potsiny?